လမ်းပတ်ရဲ့နေရာမှာ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာကို အစားထိုးဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး – MyMedia Myanmar
လမ်းပတ်ရဲ့နေရာမှာ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာကို အစားထိုးဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး
လန်ဒန်မြို့ အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ချယ်လ်ဆီး အသင်းအနေနဲ့ ယခုလက်ရှိနည်းပြ ဖြစ်သူ ဖရန့် လမ်းပတ်ကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ် ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာနဲ့ အစားထိုး ခန့်အပ်သွားနိုင်ချေ ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီး အသင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကယ်ဒမီ အသင်းနည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူရဲ့ လက်စတာစီးတီးမှာ စွမ်ဆောင်ပြနေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထင်ကြီး သဘောကျနေတာ ဖြစ်ကာ ချယ်လ်ဆီး နည်းပြရာထူး ခန့်အပ်ဖို့ အတွက် စဉ်းစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း နွေရာသီမရောက်ခင် အထိတော့ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်သွားနိုင်ချေ မရှိသေးကြောင်း ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ဆိုထားပါတယ်။ အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ် ဟာ လမ်းပတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထား ပြည့်ဝနေပြီး အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ အတွက် အချိန်တစ်ခု ပေးအုန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း မကြာသေးမီက လက်စတာ အသင်းကို ၂ ဂိုး- ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ အပါအဝင် ပရီးမီးယားလိဂ် ၈ ပွဲမှာ ၅ ပွဲအထိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် အေဘရာမိုဗစ် ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး နည်းပြ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လမ်းပတ် အနေနဲ့ ဒီကနေ့မှာ ကစားမယ့် အက်ဖ်အေ ဖလား စတုတ္ထအဆင့် ပွဲစဉ်မှာ ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် လူတန် အသင်းကို အနိုင်ကစားနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေတာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ချယ်လ်ဆီး အသင်းအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှာ ကစားသမားသစ်တွေ အတွက် ယူရို သန်း ၂၀၀ ကျော် အသုံးပြုထားတာကြောင့် ဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ အခုလို ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နေရာ တစ်နေရာ မရသေးတဲ့ အပေါ် လက်မခံနိုင် ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လမ်းပတ် ကလည်း သူ့မှာ ဘာပြဿနာတွေမှ မရှိကြောင်းနဲ့ ဖိအားတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း ‌ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ “ အဲ့ဒါက အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပဲ။ ကျွန်တော် အရင်က ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကျွန်တော်က ချယ်လ်ဆီးရဲ့ နည်းပြလည်း ဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ အသင်းရဲ့ အလားအလာကောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူက ကျွန်တော့်လောက် စိတ်လှုပ်ရှားနိုင်မှာလဲ ? ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး လုပ်နေပါတယ်။ ဒီကိုလာပြီး‌ ချယ်လ်ဆီး ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ် ရတာက ကျွန်တော့်အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ ကျွန်တော် အောင်မြင်ချင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပွဲတွေ ကစားပြီး အနိုင်မရရှိတဲ့အခါ ကျွန်တော် ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ နဲ့ အဖြေတွေကို ရှာဖွေပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော် အဲ့ဒီအရာတွေ အတွက် တိုက်ခိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ ကျွန်တော် အဲ့ဒါကို ကွင်းအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ကစားသမားတွေဆီကနေ ရဖို့အတွက် မျှော်လင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အဆိုးဝါးဆုံး ဖိအားတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါ ကောင်းတဲ့ ဖိအားပါ၊ ကျွန်တော့်ဘဝ နဲ့ ဒီလို လုပ်နေရတာကို ကျေနပ်ပါတယ် ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
The post လမ်းပတ်ရဲ့နေရာမှာ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာကို အစားထိုးဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-24T14:02:13+06:30January 24th, 2021|MYSPORT MYANMAR|